Somaliland: “Markasta Oo Aad Kala Qarin Ku Samayso Hantidaada Ganacsi Cashuurtooda, Ogow Inay Kastamka Hubinta Kaaga Xanibmi Karto” - Wargane News
Home Somali News Somaliland: “Markasta Oo Aad Kala Qarin Ku Samayso Hantidaada Ganacsi Cashuurtooda, Ogow...
“Qofku Wuxuu Sito Waa Inuu Si Sharci Ah U Wada Cashuurto, Kana Fogaado Wax Kasta Oo Hantidiisa Caqabad Ku Noqon Karta” Wasaaradda Maaliyadda Oo Beenisay In Cashuur Lagu Kordhiyay Khudaarta Dibadda Laga Keeno
Wasaaradda Maaliyadda Somaliland, ayaa beenisay isla markaana waxba kama jiraan ku tilmaantay cabasho ay kaga cabanayeen wasaaradda maaliyadda ganacsatada khudaarta ka keenta dalka Itoobiya oo sheegay in wasaaradda Maaliyaddu cashuur ku kordhisay. Agaasimaha waaxda kastamada wasaaradda Maaliyadda Somaliland, Idiris Xasan Diiriye(Xoosh), oo arrintan ka hadlay ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay in la kordhiyey wax cashuur ah oo u gaar ah khudaarta dibada laga soo waarido.
Agaasimuhu waxa ugu horreyn uu ka jawaabay cabasho kasoo yeedhay qaar kamid ah ganacsatada khudbarada ka soo waarida dalka Itoobiya, “Khudaarta waxaa lagu soo cashuuray Wajaale, waxaana mar labaadka lagu hubiyaa Kastamka Abaarso, markaa wixii loo soo cashuuray iyo waxay baabuurtu u siddo ayaa la isu eegaa. markaa haddii ay jiraan wax aan la soo cashuurin oo dheeraad ku ah inta loo soo cashuuray,ayaa halkaa lagu cashuuraa khudaartaasina siday sheegeen saddex habeen may joogin kastamka, habeen hore (habeen afraadkii) ayay goor dambe Abaarso soo gaadheen, waxaanu Kastamka Abaarso oo shaqadiisa gudanayaa bilaabay dib u eegista khudaarta kala duwan ee baabuurta saaran iyo inta lasoo cashuuray in ay is leeyihiin,”ayuu yidhi Agaasimaha oo u warramay wargeyska dawladda ee Dawan. Waxaana uu intaas ku ladhay “Waxaa jiray oo ku soo baxay baaburtaas in qaybo aan cashuurayni ay ka mid ahaayeen khudaarta ay sideen, markaa waxaa la waydiiyay oo qudha inta dheeraadka ku ah in ay cashuurtaan oo ay iska bixiyaan, waanay ku deg degeen eedaha ay warbaahinta mariyeen, markii dambena cashuurtii khudaarta ay siteen ee dheeraadka ku ahayd inta la cashuuray oo laga rabay ayay iska bixiyeen dorraad maalinnimadiiba waa loosoo fasaxay khudaartaas.” “Waxaan u sheegayaa bulshada Somaliland in aanay jirin cashuur la kordhiyay, laakiin looga baahan yahay qofku wuxuu sito in uu si sharciya u wada cashuurto oo aanu kala qarin isla markaana ka fogaado wax kasta oo hantidiisa caqabad ku noqon kara. markasta oo aad hantidaada ganacsi cashuurtooda kala qarin ku samayso kastamka labaad ee hubinta ah in ay kaaga xanibmi karto ogow,” ayuu yidhi agaasimaha waaxda kastamaddu.